यी हुन् असार १ गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिने सेवाहरु (सूचीसहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी हुन् असार १ गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिने सेवाहरु (सूचीसहित)
Poonam June 13, 2021 समाचार	0
काठमाडौँ । केही सुविधाहरु खुकुलो बनाएर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा असार ७ गतेसम्म लम्ब्याइने भएको छ । आइतवार बसेको उपत्यकाका तीनै जिल्ला ९काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर०का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले केही खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा एक साता थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
– औषधी, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु, सेवा खरिद वा लिनु पर्दा मात्र घरबाट लिन पाइने ।
– तरकारी फलफूल खाद्यान्न, दूध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरु किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर९ग्रोसरी मात्र० बिहान ११ बजेसम्म खुला गर्न पाइने । राति ९ बजेदेखि विहान ११ बजेसम्म स्थानीय ढुवानी गर्न पाइने ।
– पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेसको हकमा विहान ११ बेजसम्म सञ्चालन गर्ने । विकास निर्माणजन्य सामाग्रीका पसलहरु – छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, स्यानिटर, हार्डवेयर पसल० दिउँसो ४ बजेपछि सञ्चालन गर्न सक्ने ।
भक्कानो छोडेर रुँदै छुट्टिए स्मिता र लाउरे! राहुललाई बिहेकाे फोन आएपछि रूदै दिइन नयाँ जिवन खुशीकाे कामना! (भिडियो)
सँगै सुतेकी श्रीमति ओछ्यांन बाटै गायब, श्रीमानकै अ’गाडी प्रेमीसंग भा’गिन (हेर्नुस् भिडियो)